Oge Mgbapụta, Mgbara Ọkụ, Igwe Ọdụdọ, Nrụpụta Ike - NAIDIAN
Nchekwa netwọkụ eletriki
Ordị kọntaktị kọntaktị
SSR agba anọ
Ọkachamara etinye aka na nyocha, mmepe, ire na ọrụ nke? Typesdị relays niile.
Ngwakọta dị iche iche eji arụ ọrụ
N’IME YOUBVERR OF OFzọ.
Site na ịhọrọ ma hazie
enyere gị aka ịkwado ego ịzụta nke na-eweta uru pụtara.
NDD3 usoro ọgụgụ isi nlekota moto n'echebe
Naidian Relay Static ugbu a agba anọ JL-11A 220V ...
Ọnụ ala SPDT 24-240VAC / DC na-egbu oge 0.5S-100 ...
Ezigbo mma RST25 Elekere eletriki Volio…
Naidian Multi Time General Automatic Oge Gbanwee ...
Naidian TM619 Oge Kwa Uwa
Naidian White Agba 12V 24V Digital Relay ...
Ezi mma 220VAC REX-C700 J ụdị okpomọkụ ...
Ezigbo mma 3 Nnukwu ọtụtụ ọrụ D…
Naidian GKR-02 Vollay Monitoring Device Relay
Ihe ato ato n’ogho…
Naidian Home Line Nchebe NDD5-K
Nchekwa Nweta ụlọ nke NDD5-K…
Naidian MK-01 Relopure Relay
AKASEMILM DEVAKA MAKA MAKA MARA-01…
Naidian moto nkaa Relay, Relay Re…
Naidian moto tụgharịrị Relay ...
NAIDIAN GROUP Company Limited guzobere n’afọ 1989, bu okachamara etinye aka na nyocha, mmepe, ire na ọrụ nke ụdị relays, dị ka mgbagha dị elu, Relay General-nzube, Relay Time na Elektrik. Anyị dị na No.626, Chezhan Road, Liushi Town, Wenzhou City, Zhejiang, China, na-enwe ọmarịcha njem na gburugburu ebe mara mma. Ndị raara onwe ha nye na njikwa ike dị mma yana ọrụ ndị ahịa na-eche echiche, ndị otu ọrụ anyị nwere ahụike na-adị mgbe niile iji kparịta ihe ị chọrọ na iji hụ na afọ ojuju ndị ahịa zuru oke.
Holidaybọchị ezumike May
Ezigbo ndị enyi, ụbọchị ọrụ na-abịa. Dịka usoro iwu nke kansụl steeti na ezumike nke iwu na ọnọdụ ọnọdụ ọrụ anyị, anyị na-agwa ndị na-eso ihe ezumike ụbọchị ụbọchị nke 2020: 1. oge ezumike maka ụbọchị 3days, yana ụbọchị anọ nke Mee .. ..
Nhọrọ nke nchekwa nchekwa voltaji
Dika ac contactor coil voltaji nke igwe njikwa ahu, onodu oru nke onye ahọpụtaputara kwesiri ka o dabaa na ac contactor coil vol.The voltaji na aru oru nke onye na - echekwa ugboala bu ac 380V ma obu 220V (nke gunyere volta olu na aru oru nke kọntaktị nke usoro nke mmepụta ...
Nkwa ezumike Qingming
Umu nnem, ubochi nke nkata na-abia. Dika usoro iwu nke kansul steeti na ezumike nke onodu ubochi ya na onodu oru nke oru anyi, anyi n’ezi ozi banyere ihe ezumike ndi ozo n’abali n’aho 2020: 1. Oge ezumike n’onwa Eprel 4, Eprel 5 ma obu…
Umelaghachi ọkwa ngosi
Febbọchị Mee / 24/2020
Ezigbo ndị ahịa: Nke mbụ, ekele maka nkwado dị ukwuu maka ụlọ ọrụ anyị na 2019 afọ. Ihe ntiwapụ nke COVID-19 adabala agbụrụ mmadụ nile n'ọgụ dị egwu nke ọrịa na-efe efe nke ukwuu n'usoro ụwa. Iche ihu mwakpo mberede na nke a na-enwetụbeghị ụdị ya, ndị China p…
Alibaba kwenyesiri ike na onye ahia ya
Febbọchị Mee / 20/2020
Copyright - 2010-2021: All Rights echekwabara. Nka na ụzụ nkwado: globalso